ဗြိတိန်ဝေလနယ် INTERACTIVE မှစတူဒီယို 2019 ခုနှစ် SKER ၏ထိတ်လန့် MAID များလွှတ်ပေးရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာ - သတင်း - 2019
Sker ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ထိတ်လန့် Maid
အဆိုပါဂိမ်းတစ်ဆယ်ကီလိုမီတာဝေးလ် Interactive မှ၏ developer များ၏ရုံးခန်းကနေသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. 1872 ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရစ်ချတ် Blackmore "Skeram ကနေမိန်းကလေး" အားဖြင့် eponymous ထိတ်လန့်ဝလေသီချင်းနှင့်စာအုပ်, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဝေလနယ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိအိမ်တော်ကို Skeram (Sker အိမ်), - သို့သော်ဤအမှုအခင်းဖြစ်ပွားရာ၏နာမတော်ကြောင်း မှလွဲ. ချိတ်ဆက်ကစား။
အဆိုပါဂိမ်းဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဂီတပညာရှင်သောမတ်စ်အီဗန်သည်, မိမိချစ်ရာသခင်သည်ကယ်နှုတ်ထံသို့ သွား. အဘယ်အရပ်ဟိုတယ်, သို့လှည့်တစ်ဦးသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦ၌တည်ရှိ၏။ Sker လုပ်ဆောင်ချက်အိမ်ဖေါ် 1898 ခုနှစ်တွင်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
Sker ၏အိမ်ဖော် - ရှင်သန်မှုထိတ်လန့်များ၏အမျိုးအစားအတွက်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ဂိမ်း။ ဝေလနယ် Interactive မှဘာသာရပ်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းအလေးပေး (developer များအများအပြားနောက်ဆုံးတွင်မှကတိပေး) နှင့်ရန်သူလက်မှသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေရှာဖွေရေး: ဒါဟာအဘယ်သူမျှမလက်နက်များနှင့်အညီ, ထိုတိုက်ပွဲများရှိပါတယ်။
အဆိုပါဂိမ်းတတိယသုံးလပတ် 2019 ဘို့စီစဉ်ထားသည်။ Sker ၏အိမ်ဖော်ကို PC, PlayStation 4, Xbox One နဲ့ Nintendo ပြောင်းလဲမည်ပေါ်တွင်ပေါ်လာ။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လူကြိုက်များ browser များ Installing
အကြောင်းရင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ: Windows 8 ကို run မနေပါနဲ့
VLC Media Player ကို - Setup ကိုလမ်းညွှန်
IPhone ကိုမှ iPhone မှသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်လွှဲပြောင်းရန်
Windows 8 ကိုတစ်စင်ကြယ်သောတပ်ဆင်ခြင်း
FL Studio က
MPP တိုးချဲ့ဖိုင်တွေကိုအများအပြားပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအမျိုးအစားများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ရဲ့သင်သည်ထိုသို့သောစာရွက်စာတမ်းများဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပုံကိုနှင့်အဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။ အဆိုပါဖိုင်ကို MPP-ဖိုင်တွေ MPP-ဖွင့်သူတို့ကိုမသင့်လျော်စဉ်းစားရန်ရှိသောကြောင့်သို့သော်ဤဖိုင်အမျိုးအစားများ, အလွန်ရှားပါးသောဖြစ်ကြသည် MobileFrame ပလက်ဖောင်းဖန်တီးမိုဘိုင်း application ကိုအဖြစ်မူဆယ်အဖွဲ့၏အသံဖမ်းတဲ့အလုပ်လုပ် archive ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Windows 8 ကို PC မှာ Restore
https://termotools.com my.termotools.com © သတင်း 2019